शिखर इन्सुरेन्सको २९ प्रतिशत बोनस सेयरधनीको डिम्याट खातामा, नपाउनेले के गर्ने ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
शिखर इन्सुरेन्सको २९ प्रतिशत बोनस सेयरधनीको डिम्याट खातामा, नपाउनेले के गर्ने ?
काठमाडौं । शिखर इन्सुरेन्सले २९ प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको छ । कम्पनीले गत मंसिर २१ गतेसम्म सेयर डिम्याट गराएकाहरुको बोनस खातामै जम्मा गरिदिएको हो । त्यस्तै, त्यस समय पश्चात डिम्याट गरेका सेयरधनीहरुको बोनस सेयर पनि क्रमशः जम्मा गरिदिने बताएको छ ।
सेयर धितोकर्जा लिएका सेयरधनीको हकमा भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितो फुकुवाको स्वीकृति पत्र बुझएपछि मात्र खातामा बोनस जम्मा हुनेछ । शिखर इन्सुरेन्सको गत पुस ७ गते सम्पन्न साधारण सभाले गत वर्षको नाफाबाट २९५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर तिर्न १.५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।